हाम्रो प्यापरिका डे ला भेराको साथ स्वादिष्ट साउथ ब्रड बीमहरू ThermoRecines
ला Vera बाट paprika साथ ब्रड बीन्स
द्वारा एसेन जिमेनेज
आज एक स्वस्थ डिश हो र ती मध्ये एक हो जुन हामी नियमित रूपमा खान गर्दैनौं (कमसेकम घरमा)। उनीहरु फली गेडाहरू sautéed।
तपाईं भूमध्यसागरीयबाट ती मानिसहरूलाई निश्चित रूपले राम्ररी थाहा छ। जे भए पनि, हामी सबै यसलाई स्थिर खण्डमा सुपरमार्केटमा फेला पार्न सक्छौं।
यस पटक हामी उनीहरूको साथ पकाउँदछौं पेपरिका, त्यो धुँवादार स्वाद र यति विशेष रंगको साथ मसाला, र हामी यसलाई एक रोल संगै पनीरमा पनीर चीज पनीर भट्टीमा (यस यस नुस्खामा स्ट्रबेरी gazpacho तपाईं यो देख्न सक्नुहुन्छ कि यो कसरी भयो)।
र अर्को सुझाव, यी सिमीले पनि काम गर्न सक्छ साथ कुनै मासु लाई, तपाईलाई के लाग्छ?
कुनै श doubt्का बिना, धेरै व्यक्तित्व सहित एक हल्का डिश जुन धेरै छोटो समयमा बनेको हुन्छ। अवश्य पनि, जब यो सकियो, यसलाई तुरुन्त सेवा गर्नुहोस् र ... रमाईलो गर्नुहोस्!
1 ला Vera बाट paprika साथ ब्रड बीन्स
ब्राड गेडाहरू ला भेराबाट पेप्रिकाको साथ sautéed, पहिलो पाठ्यक्रम को रूप मा crunchy Parmesan साथ वा दोस्रो गार्निशको रूपमा प्रयोगको रूपमा आदर्श।
खाना पकाउने समय: 27M
450० ग्राम स्थिर फ्रिज, पोड हटाइयो
ला भेराबाट १ चम्मच पेपरिका
ग्रेचिनका लागि परमेसन चीज (वैकल्पिक)
हामीले प्याजलाई गिलास र कार्यक्रममा राख्यौं २० सेकेन्डको गति 3। स्प्याटुलाको साथ, हामी प्याजको अवशेषहरू कम गर्छौं जुन शीशको माथिल्लो भाग र ढक्कनमा रहन्छ।
हामी तेल र कार्यक्रम थप्छौं १ minutes मिनेट, भेरोमा, गति १। हामी ढक्कन खोल्छौं र ब्लेडहरूको वरिपरि पेप्रिका थप्दछौं (अन्यथा यो तिनीहरूमा रहन्छ र यो मिसिने छैन)।
हामी व्यापक सिमी थप्छौं (यदि तपाईं छाला पहिले हटाउनुहुन्छ भने, तपाईंसँग अझ नाजुक डिश हुनेछ), पानी र नुन र हामी प्रोग्राम १० मिनेट, भेरोमा तापमान, बाँया पालो, चम्चाको गति।
तपाईं पोडसहित कोमल र ताजा गेडा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
थप जानकारी - स्ट्रबेरी gazpacho
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: तरकारीहरू
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » तरकारीहरू » ला Vera बाट paprika साथ ब्रड बीन्स
नमस्ते, चढाई, मेरो टिप्पणी अर्को दिनको नुस्खाको सम्मान गर्दैछ, किवी केक, म केवल यो भन्न सक्छु कि यसले विजय प्राप्त गर्दछ, म सबैलाई धेरै मन पराउँछु र ती व्यंजनहरु को लागी कुनै जटिल अनुग्रह, एक अ h्गालो
म कत्ति खुसी छु! तपाईं सहि हुनुहुन्छ, यो धेरै सरल छ र यो धेरै धनी छ। धन्यबाद, मलाई भन्नु भएकोमा धन्यबाद!
हामी केही सिमीहरू खान्छौं जुन सिसाको भाँडामा आउँछन्।
किनकि तिनीहरू स्थिर छैनन्, न त तिनीहरूको पोड नै छ, म कल्पना गर्छु कि तयारीको समय २० मिनेट भन्दा कम छ, हैन?
तपाईंको व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद।
मैले तिनीहरूलाई जस्तो देखेको छैन। तयारीको समय कम हुने थियो, जस्तो तपाईं भन्नुहुन्छ। प्रोग्राम उदाहरणको लागि १० मिनेट र यस समय पछि तपाइँले ढक्कन खोल्नुहुन्छ कि भनेर हेर्न तिनीहरू तपाइँलाई मनपर्ने तरीका हो। यदि तिनीहरूको अभाव छ भने, केहि थप मिनेटहरू मिलाउनुहोस्। उनीहरूले तपाईलाई कसरी हेर्छन् भनेर तपाई मलाई बताउनुहुन्छ।
हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद!
हो, म अन्य समयमा यो गर्छु जब म समयको साथ हिचकिचाउँछु, यो प्युरी भन्दा पनि रिग्रोग्राम गर्न सधैं उत्तम हुन्छ !!! उनी। फेरि पनि धन्यबाद। म तपाईंलाई सूचित राख्नेछु।
अहिलेसम्म मैले तिनीहरूलाई केही क्यूब ह्यामको साथ भुटेको क्यासरोलमा पकाएको छु, र ती तुरुन्तै सकियो; वास्तवमा, तिनीहरू जारबाट बाहिर सलादमा थप्न सकिन्छ। तिनीहरूलाई हबास बेबी भनिन्छ, तिनीहरू "अमालुर" ब्रान्डका हुन् र तिनीहरू ४२५ ग्राम जारमा आउँछन्। (तौल घटेको)
तपाईं के भन्नुहुन्छ भनेर तिनीहरू पहिले नै पकाइसकेका छन् ... म तिनीहरूलाई 50० ग्राम पानी मात्र राखी make मिनेट मात्र पकाएर बनाउने प्रयास गर्छु। हेरौं कसरी प्रयोग भइरहेको थियो!
नमस्ते साथी !! मेरी आमा, जो ग्रेनाडाकी हुनुहुन्छ, फ्राइड अण्डाहरू र सेरानो ह्यामले उनीहरूलाई घरमा धेरै बनाउँछिन्। यो मेरो मनपर्ने खानामध्ये एक होईन, तर मेरो घरमा तिनीहरूले यसलाई धेरै रमाइलो गर्दछन्। चुम्बनहरू।
खैर, तिनीहरू धेरै स्वादिष्ट हुनु पर्छ। यदि कोहीले आमा भन्दा राम्रो पकाउँदैन भने ... चुम्बनहरू!
१० मिनेटको साथ। PERFECT। हामीले यसलाई प्रेम गरेका छौं।
Cool! धन्यवाद मार्टा, म यो दिमागमा राख्नेछु।
एसेनलाई जवाफ दिनुहोस्
ओ'जारा एस्पाड्रिल भन्यो
उनीहरू कत्ति राम्रो देखिन्छन्! भोलि म खरीद गर्नेछु, म यस साताको अन्त्यमा तिनीहरूलाई बनाउनको लागि फ्रिज गेडाहरू लेख्दछु। फ्राइड अण्डाको साथ।
Alpargata O'Jara लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई एक उत्तम साथी जस्तो लाग्छ। म आशा गर्दछु तपाईं तिनीहरूलाई मन पराउनुहुन्छ!
तपाइँको टिप्पणी को लागी धन्यवाद! हामी मनपराउँदछौं कि हामी तपाईंलाई के मन पराउछौं।
AscenJimenez लाई जवाफ दिनुहोस्
सफ्ट चकलेट मउसे - बिना क्रीम-